'नाङ्गै छ मान्छे'
अनुपम रोशी, उपन्यासकार
🆀 किन नाङ्गिदैछ छ मान्छे ?
➠ सरासर भन्नु पर्दा पूर्ण हुने भ्रमले नांगिदै छ मान्छे ।
🆀 ‘र, हरेक स्थितिमा ऊ नाङ्गै रहेको छ’ उपन्यासको अन्यमा भन्नुभएको छ, साँच्चै नाङ्गै छ त मान्छे ? मानिसका सबै आवरण भ्रममात्र हुन् ?
➠ मान्छेका अस्वाभाविक चाहना, परिवर्तित समय, बीच आडम्वरी सभ्यता र खोक्रो आदर्श बास्तवमै आवरण मात्रै भएको छ । उसले बाचेको अस्तित्व विलकुलै नांगो छ । देख्ने सपना, उसले पाल्ने रहर, र ऊ बाँचीरहेको सभ्यताको तालमेल नभएको अवस्थामा मान्छे नाङ्गिन पुगेकाछन् ।
🆀 उपन्यासमा नाङ्गिनु कतै रहरजस्तो, कतै बाध्यताजस्तो भएर देखापर्छ । बाध्यता हो कि रहर ?
➠ उपन्यास भित्र– परिवेश, सन्दर्भ समय अनुसारका घटनामा स्वभाविकरुपवाट पात्रहरु आएकाछन् । यसमा बाध्यता रहर भन्ने कुरा हुदैन । यदी पाठकलाई कतै त्यस्तो लागेको छ भने कुन सन्दर्भमा लागेको छ जानकारी गराउन आग्रह गर्छु ।
🆀 अझै नारीलाई लज्जाको प्रतिक मानिदैछ एकातिर, अर्कोतिर ‘नाङ्गो मान्छे’मार्फत थुप्रै नारी पात्र नांगिएका छन् । यो विरोधाभाषको जवाफ चाहिं के हो ?
➠ समस्या यहिँनेर छ । हामी अझै पनि नारीलाई एक वस्तुकोरुपमा हेर्ने गर्छौँ । लाज र संकोच जस्ता अप्ठ्यारा नारीले नै भोग्नु पर्छ भन्ने सोच्छौ । तर नाङ्गो मान्छे नारी र पुरुष भन्दा पनि अहिलेको समाज र मान्छेको मन भित्र बढ्दै गएको विचलनको कथा हो । जसमा नारी पुरुष दुवै पर्छन् । यसमा विरोधाभाषको प्रश्नै छैन ।
🆀 उपन्यासकी नायिका (मनसूनी) को भावनात्मक आत्मसमर्पण, निरिहता र निराश मनोदशाले के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
➠ मनसुनी त्यो पात्र हो जसमा स्वभाविकरुपमा उत्पन्न हुने मानविय सम्वेगहरुछन । त्यसै अनुरुप ऊ हरेक घटनाहरुमा प्रभावित छ । समाज, परम्परा, संघर्ष, प्रेम, पीडा, र खुसी यी सबै परिस्थितीमा गुज्रिएको मान्छेको अवस्था हो मनसुनी ।
🆀 समाजमा ‘दर्शन’ जस्ता पात्र किन छन् र तिनको खोज के हो ?
➠ समाज, परम्परा र आधुनिकताको संक्रमणमा छ । जसले मान्छेलाई हरेक क्षेत्रमा सम्लग्न र प्रयोग गराउदै आएको छ । यसरी प्रयोगहुदै जाँदा मान्छे रित्तिदै जाने क्रम बढेको छ । जसले असन्तुष्टि र अपूर्णतालाई जन्माउदै लगेको छ । अनि मान्छेले नयाँ नयाँ चाहना र सपना पालेर कुण्ठित र विकृत हुदै गएकाछन् । त्यही कुण्ठा र विकृतीका कारण दर्शन जस्ता पात्रको जन्म भइ रहन्छ ।
🆀 उपन्यासले उठाएको बिषयमा भन्नेपर्ने तर अहिलेसम्म नभनिएको बिषय केही छ ?
➠ उपन्यास नाङ्गो मान्छे, अहिलेका विचलित मानव समुदायको कथा हो । जहाँ हामीहरु पनि उभिएका छौ । उनीहरुले बाचेको बर्तमान हाम्रै बर्तमान हो । जसलाई गहिरिएर बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ ।
㉄ कला अनुरागी